Intersections ပြခန်းပိုင်ရှင် Marie-Pierre Mol သည် ဂန္တဝင် မြန်မာအနုပညာရှင် ဦး အောင်ခင်၏အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပူးတွဲထုတ်ဝေ - LUXUO MM
Marie-Pierre Mol သည် ပန်းချီကားများတွင် အသံနှင့်အရောင်များကို မြင်ကြားနိုင်အောင် ရေးဆွဲသည့် ဂန္တဝင် မြန်မာအနုပညာရှင် ဦးအောင်ခင်အား သတိရ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည်။
Jul 27, 2020 | ရေးသားသူ - Victor Paul Brang Tun
မန္တလေးကျုံးတွင် ပန်းချီရေးလေ့ကျင့်နေသော အောင်ခင်
ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာသမိုင်းပညာကျွမ်းကျင်သူရှင်တစ်ဦး အနေနှင့် Marie-Pierre Mol သည် Intersections ပြခန်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပြခန်း၏လိုဂိုတွင်ပုံဖော်သော လမ်းဆုံ ပုံစံ အတိုင်း Intersections ပြခန်းသည်အနုပညာလက်ရာများ နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအနုပညာပုံစံများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ကိုပုံသွင်းပေးသည့် အနုပညာလက်ရာများကို ဖော်ပြရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ အနုပညာများမှတစ်ဆင့် ယဉ်ကျေးမှုများကိုပေါင်းကူးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Intersections သည် အရှေ့တောင်အာရှအခြေစိုက် အနုပညာရှင်များကို ကိုယ်စားပြု၍ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာကို အဓိကအာရုံစိုက်ပြသသည်။ ပြခန်းပိုင်ရှင်သည် အမြော်အမြင်ရှိရှိနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောပြပွဲများမှတဆင့် လူငယ်စွမ်းရည်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို (ရုံးများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအိမ်များ) ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် အနုပညာစုဆောင်းမှုများ တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းပေးပါသည်။
အနုပညာအတွက် ပင်ကိုစူးစမ်းလိုစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် အသေးစား Pop-up ပြခန်းတစ်ခုအနေဖြင့် စတင်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါတွင် အနုပညာပန်းချီလောကတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ Art Stage Singapore တွင်မြန်မာအနုပညာရှင် ၂ ဦး ကို တင်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဂုဏ်အသရေဧည့်သည်အနုပညာသမားရှစ် ဦး အနက် တစ် ဦး အနေဖြင့် ၂၀၁၅ Art Paris Fairတွင်စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ဦး နှင့်မြန်မာအနုပညာရှင် ၂ ဦး တို့၏လက်ရာများကို အပြည့်အဝပြသနိုင်ခဲ့သည်။
Marie-Pierre Mol သည် ဂန္တဝင် မြန်မာ့အနုပညာရှင် ဦး အောင်ခင် (၁၉၂၁ မှ ၁၉၉၆) ၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကို “ ရောင်ဆင်အောင်ခင်” အမည်ရှိစာအုပ်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Intersections ပြခန်းပိုင်ရှင် Marie-Pierre Mol သည် ဂန္တဝင် မြန်မာအနုပညာရှင် ဦး အောင်ခင်၏အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပူးတွဲထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မြန်မာပန်းချီဆရာ ဦး အောင်ခင် (၁၉၂၁ – ၁၉၉၆)ရဲ့ ဘ၀ အကြောင်း ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဖို့ ဘာကလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာလဲ။
ဦး အောင်ခင် ၏ပန်းချီကားများကို မန္တလေးရှိသူ၏မိသားစုအိမ်၌ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသောအခါ ကြိုက်နှစ်သက်သွားပါသည်။ ဦးအောင်ခင်၏ ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့် ထူးခြားသောစတိုင်ကို ကမ္ဘာသို့ပြသခြင်းသည် မြန်မာအနုပညာသမိုင်းလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာခေတ်သစ်အနုပညာဟာ မြန်မာခေတ်ပြိုင်အနုပညာကို နားလည်ရန် အပျော်တမ်းဝယ်သူနှင့် စုဆောင်းသူများအတွက် ပျောက်ဆုံးနေသော ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ ထို့အပြင််ကြီးမားသောမိသားစုပန်းချီစုဆောင်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိခေတ်သစ်အနုပညာ၏ အထင်ပေါ်ဆုံးရှေ့ဆောင်တစ်ဦး ၏ အနုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို တင်ပြခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဦးအောင်ခင်၏ဘ၀သည် အလွန်ထူးဆန်းပြီး ထူးကဲသောကြောင့် ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်အောင်တောင် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ခေတ်သစ်အနုပညာကို အပျော်တမ်းသမားများသာမက အများပြည်သူအတွက်ပါ မိတ်ဆက်ပေးသော ဒီစာအုပ်သည် ပြီးပြည့်စုံမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ ဒီစာအုပ်သည် စာဖတ်သူများအား ရှေးဟောင်း အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုအစ မှနေ၍ တိုင်းပြည်၏လွတ်လပ်ရေးသို့၊ ထို့နောက်ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်များ၊ အမျိုးမျိုးသောလူမျိုးစုတို့၏ စုစည်းရန်သမိုင်းဝင်ခရီး၊ စစ်အစိုးရ၏မှောင်မိုက်သောနှစ်များအတွင်းနှင့်တိုင်းပြည်ကိုမိမိကိုယ်ကိုချုပ်နှောင်ထားခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများ အထိ ကို သူ၏အနုပညာလက်ရာများဖြင့် စာဖတ်သူများအား ထုတ်ဖေါ်ပေးပါမည်။
မန္တလေးတွင်စိုး၀င်းမောင်နှင့်ဗစ်တာပေါလ်ဘရန်ထွန်း၏အင်တာဗျူး (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈) ။ ဓာတ်ပုံကူညီထောက်ပံ့သူ ဗစ်တာပေါလ်ဘရန်ထွန်း။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း စင်ကာပူနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ ဗမာယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာအတွက် သံတမန်လို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဦးအောင်ခင်က မျိုးဆက်သစ်မြန်မာအနုပညာရှင်တွေအပေါ် ဘယ်လောက်သြဇာသက်ရောက်ခဲ့လဲ။
ဦးအောင်ခင်သည် မျိုးဆက်သစ်မြန်မာအနုပညာရှင်များအပေါ် နည်းသစ်များကို ပြသခြင်းအားဖြင့် ကြီးမားသော သြဇာ သက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရိုးရာအနုပညာရှင်များက ဆရာကြီး တစ်ဦး၏အလုပ်ရုံ စတူဒီယိုတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး သူတို့သင်ကြားခဲ့သော စည်းမျဉ်းများကို ဆွေးနွေး လိုက်နာခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင်ဗြိတိသျှတို့မှ စံ အသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ် – မြန်မာပညာရေးစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ သူရွေးချယ်ထားသည့် အရောင်များနှင့်အကြောင်းအရာများအားဖြင့် အောင်ခင်သည် မျိုးဆက်သစ်များကို ရဲရင့်စွာ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူကတပည့်တို့ကို သူ၏စတိုင်လ်အတိုင်း လိုက်ရန် အားပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပည့်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုရှာဖွေရန် အားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကို ပေါက်ဖွားစေရန် ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိခေတ်သစ်အနုပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဦးအောင်ခင်၏အခန်းကဏ္ကိုကို ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာရှင်များက အဓိကအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် အောင်ကို(အနုပညာ)က“ သူ့အချိန်နှင့်အခြေအနေတွင် သူကဲ့သို့ရဲရင့်စွာပန်းချီဆွဲခဲ့သော တခြားသူမရှိပါ။” ခင်ဇော်လတ်(အနုပညာ)က အောင်ခင်၏ရဲရင့်သောအရောင်များကိုသတိရ‌‌ပြောသည်။ Street Artist အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဝဏ္ဏအောင်(အနုပညာ)က အောင်ခင်၏အပြုအမူသည် အနောက်တိုင်းနှင့် မြန်မာရနံ့စစ်ကို အမှန်တကယ်ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းရာ၌ လေးစားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ အင်တာဗျူးများအားလုံးကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားနှင့်ကချင်လူမျိုးအနုပညာရှင်ဖြစ်သော ဗစ်တာပေါလ်ဘရွန်းထွန်းမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဦး အောင်ခင် – မန္တလေးကျုံး – Oil on Cardboard 81 x 122 cm (1990).
ဦးအောင်ခင်က ဥရောပနှင့်ပြင်သစ်သို့ ဘယ်သောအခါမျှ ခရီးမသွားခဲ့ဖူးပေမယ့် သူ၏အနုပညာတွင် အထင်ကရဝါဒီများနှင့် ယင်းပန်းချီရေးနည်းများ၏ မြင်သာသောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အဲ့အကြောင်းကို ထပ်ပြီး ပြောပြပါဦး။
Impressionists များသာမက post-impressionists နှင့် cubists များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သူ၏အရောင်ချယ်လှယ်သည့်အရောင်၊ အမှောင်ထုတွင် အလင်းပုံဖော်ပုံနှင့် သူ၏လက်ရာများနှင့်သူ၏အကြောင်းအရာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Impressionists ဆရာများနည်းတူ ဦးအောင်ခင်သည် သူ၏ပန်းချီဆရာများနှင့် အပြင်သွားပန်းချီဆွဲခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ Monet ကဲ့သို့ သူသည် အလင်းရောင်နှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် အကြောင်းအရာ တခုကိုအမြဲကိုယ်စားပြုလေ့ရှိသည်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် အောင်ခင်သည် မိသားစုပုံတူများ၊ ဘာသာရပ်များနှင့်ဆိုင်သော ပြင်းထန်သောအကြောင်းအရာများ ကို ၁၉ရာစုပြင်သစ်ပန်းချီဆရာများ ကဲ့သို့ ပန်းချီကားများ ကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ Sainte Victoire တောင်သည် Cezanne အတွက်အထင်ကရဘာသာရပ် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ကဲ့သို့ မန္တလေးကျုံးသည် အောင်ခင်အတွက် မြန်မာပြည်၏ နောက်ဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည့် အမှတ်တရ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် တိုင်းပြည်၏ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်နှင့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၏ ခိုင်မာသောသင်္ကေတဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မန္တလေး၏ခမ်းနားမှုကို သတိရဖြစ်သည်။
Cubism နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် cubist ပန်းချီကားအမြောက်အများကို ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အများစုကို အောင်ခင်သည် အကြောင်းတစုံတရာမရှိဘဲ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဟု ပန်းချီဆရာ၏သမီးချိုချိုအောင်က ပြောပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သေချာသိသည်မှာ သူ၏ပုံကြမ်းစာအုပ်များတွင် Cubist စတိုင် ရေးစပ်သီကုံးမှုများစွာကို ဖော်ပြထားတာမြင်ရသည်။ ၎င်းသည် Cubist နည်းစနစ်ကို အောင်ခင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဤစတိုင်အား သူ၏ကျယ်ပြန့်စွာ စူးစမ်းလေ့လာမှုကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်သည်။
ဦးအောင်ခင် – အရိပ်အောက်မှာနှင်းဆီပန်း -Gouache on paper 54.3 x 39.5 cm (1960).
ဦးအောင်ခင်၏လက်ရာများကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အရှေ့တောင်အာရှတစ်လျှောက်ရှိ အနုပညာချစ်သူများ ဘယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မလဲ။
အနုပညာလက်ရာများကို မန္တလေးရှိမိသားစုအိမ်တွင်သာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ မိသားစုမှပြတိုက်ငယ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သို့သော် ပန်းချီကားအချို့ကိုသာ ရွေးချယ်ပြသထားသည်။ စင်ကာပူအနုပညာပြတိုက်နှင့် အမျိုးသားပြခန်းတို့သည် အောင်ခင်၏ပန်းချီကားများ ဝယ်ယူထားဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ သူတို့ပြတိုက်၏အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုအတွက် ပြသကြသည်တော့မဟုတ်ပါ။
ဤစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေရန် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုမှာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်သူတို့၏အနာဂတ်ပြပွဲများတွင် ဦး အောင်ခင်၏အောင်မြင်မှုစီးရီးများကိုပြသရန်စိတ်ဝင်စားရန် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာအနုပညာမြင်ကွင်းမှ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာရှင်များသည် မည်မျှ ထိထိရောက်ရောက်နှင့် လူသိများကြပါသနည်း၊ မြန်မာအစိုးရသည် ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနုပညာပြပွဲနှင့် အနုပညာပညာရေးကို ထောက်ပံ့နေပါသလား။
စင်ကာပူအနုပညာပြတိုက်၊ စင်ကာပူအမျိုးသားပြခန်း၊ ဂျပန်ရှိ Fukuoka အနုပညာပြတိုက်၊ ပြင်သစ်ပဲရစ်ရှိ Palais de Tokyo၊ နယူးယောက်ရှိအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ စသည့် အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မြန်မာအနုပညာရှင်များ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြင်တွေ့မှု ပိုမိုရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်များကို ယခုအခါ အာရှတွင်ကြီးပွားတိုးတက်သည့် Biennales နှင့် Triennales အဖြစ်များတွင် ပါ၀င်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ၂၀၁၅ Lyon Biennale တွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အနုပညာလူငယ်မျိုးဆက်သည်များစွာသောနိုင်ငံတကာ residency အစီအစဉ်များမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသည်။ စင်ကာပူတွင် NTU Centre for Contemporary Art သည် မြန်မာအနုပညာရှင်များစွာကိုကြိုဆိုခဲ့သည်။ အနုပညာပြပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး Art Stage Singapore နှင့် SEA FOCUS သည် ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာရှင်များတွက် ထိတွေ့မှုများစွာ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား အနုပညာစာပေမရှိခြင်းနှင့် အနုပညာရှင်များသည် အစိုးရထံမှ မည်သည့်အထောက်အပံ့မှ မရရှိခြင်းကြောင့် ခေတ်ပြိုင်မြန်မာ့အနုပညာမြင်ကွင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ဗဟုသုတနည်းပါးနေဆဲဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒေသခံစုဆောင်းသူအရေအတွက်မှာအလွန်နည်းပါးနေသေးသည်။ တရုတ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့၏ဥပမာများသည် ကနဦး အဆင့်တွင် ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းသူများ၏ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကို ပြသပါသည်။ သို့သော် ဒါကဒီမျိုးဆက်သစ်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အနုပညာပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ရိုးရာနည်းစနစ်များကိုသာ ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားခဲ့ပြီးခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်များအားလုံးသည် ခေတ်ပြိုင်ပုံစံများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်သင်ကြားယူရမည်ဟု မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရသစ်နှင့်အခြေအနေသည်ပြောင်းလဲနေသော်လည်းရှေ့ဆက်သွားရမည့်လမ်းများစွာရှိသေးသည်။ အနုပညာရှင်များသည် ရန်ကုန်နှင့် နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်များကို တံခါးဖွင့်ပေးသော နိုင်ငံခြားဖောင်ဒေးရှင်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်တွင် များစွာမှီခိုနေရသည်။
ဦးအောင်ခင် – မန္တလေးကျုံး – Goucahe, 39x 54.5cm.
မြန်မာအစိုးရသည် သင်၏ပဏာမခြေလှမ်းနှင့် ဤစာအုပ်ထုတ်ဝေမှုကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ဤစာအုပ်သည် Intersections နှင့် Phnom Penh ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Re-Creation၊ ဤစီမံကိန်းအတွက် စပွန်ဆာများနှင့်ကမကထပြုသူများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည်။
ဘုရင်အနော်ရထာသည် ၁၁ ရာစုတွင် ပထမဆုံး မြန်မာအင်ပါယာကို တည်ထောင်သောအခါ သူ၏မြို့တော်ကို ပုဂံတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပုဂံ၏ကျယ်ပြန့်သောလွင်ပြင်၌ ပြန့်ကျဲနေသောထောင်နှင့်ချီသောစေတီများသည် အင်ပါယာ၏အင်အားကိုသာမက ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာခေတ်မီဆန်းပြားခဲ့မှုကိုလည်း သက်သေထူသည်။
ပထဝီအနေအထားအရ အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်အကြားတည်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာများကို တီထွင်ရန်အတွက် အနုစိတ်နှင့်အနုပညာကို အကောင်းဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်။ ပန်းပုပန်းချီ၊ ပန်းရံနှင့်ကျောက်ထွင်းထည်များအပြင် စာပေနှင့်ကဗျာများတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
ပုဂံ၏ကျော်ကြားပြီးလက်ရာမြောက်သောယွန်းထည်များသည်ရှေးဟောင်းခေတ်ဟောင်းကာလများမှလည်းဖြစ်သည်။ ပုဂံခေတ်တွင် ပန်း ၁၀ မျိုး ဟု သိကြသော မြန်မာအနုပညာနှင့် ပတ်သက်သောကျွမ်းကျင်မှု (၁၀) ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ ပန်းချီသည် ဤကျွမ်းကျင်မှုများထဲမှ တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး၊ အခြားအနုပညာပန်းများမှာသစ်သားနှင့်ဆင်စွယ်ပန်းပုလက်ရာများ၊ ပန်းပဲလုပ်ငန်း၊ သတ္တုများပုံသွန် သွန်းလောင်းခြင်း၊ ထုလုပ်သောလုပ်သား ၊ အလှည့်၊ ကျောက်ထွင်းထုခြင်း, ပန်းရန်၊ ရွှေပန်းမှုလုပ်ငန်း၊ ယွန်းထည်များဖြစ်သည်။ ဤအနုပညာနှင့်စပ်လျဉ်း မြင့်မားသော လေးစားမှုကို ပြသသောကျောက်စာစာမျက်နှာများ၌ တွေ့ရသည်။
ဦးအောင်ခင် – ချိုချိုအောင် – Oil on Cardboard, 40.5 x 30.5 cm, circa 1960.
သင်အထူးတင်ဆက်ပြောချင် သော အခြား ခေတ်သစ်မြန်မာအနုပညာရှင်များရှိပါသလား။
ခေတ်ပြိုင်မြန်မာအနုပညာကိုစိတ် ၀င်စားသူတိုင်းသည် စင်ကာပူအမျိုးသားပြခန်းမှ ပန်းချီဆရာဟောင်းအဖြစ်ခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင်များပါဝင်သည့် စုံလင်သောစုဆောင်းမှုမှစတင်သင့်သည်။
ဦးအောင်ခင်ကဲ့သို့ မဟာဆရာ ဦး Ba Nyan ၏ လက်အောက်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော ဘိုကလေးကျော်လှိုင် (၁၉၁၄-၁၉၉၆) ၏ ရေဆေးပန်းချီကားများကို ကျွန်ုပ်အထူးနှစ်သက်ပါသည်။ ဘိုကလေးကျော်လှိုင်သည် သူ၏ မိုးတိမ်မိုးကောင်းကင်ပုံဖော်မှုကြောင့် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဦးဘလုံလေး (၁၉၂၂-၁၉၉၈) သည် ဝါဒဖြန့်ချိရေးပန်းချီကားများပြုလုပ်စဉ် သူ၏အများမတူ ထူးခြားသောစတိုင်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ – ပုံကြမ်းရေးနည်းစနစ်နှင့် ကျော်ကြားသော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ပုံတူများရေးခြင်းဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့သည့်မောင်ငွေထွန်း (၁၉၃၅-၁၉၉၂) ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် ဤစာအုပ်အတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် သဘောတူခဲ့သော အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ခေတ်သစ်အနုပညာရှင်များအား အထူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လိုပါသည်။ ၁၉၃၆ နှင့် ၁၉၃၇ တွင်မွေးဖွားခဲ့သော ဦးဝင်းဖေနှင့်ကိုကိုကြီးတို့သည် ပန်းချီနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော တီထွင်မှုများနှင့် ပြသနေဆဲဖြစ်သည်။ ဦးအောင်ခင်နှင့်နီးစပ်သူ ကိုကိုကြီး၏ညီဖြစ်သူ ကျော်မိုးသာနှင့် ဦးအောင်ခင်၏သမီးချိုချိုအောင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ သူ၏ဘ၀ အဆုံးပိုင်း၌သာအသိအမှတ်ပြုခံရသည့် impressionists ကိုမဆုတ်မနစ်ထောက်မပံ့ပိုးပေးသည့်ပြင်သစ်အနုပညာကုန်သည် Paul Durand-Ruel ပါပဲ။ သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အနုပညာရွေးချယ်မှုအပေါ်မယိမ်းယိုင်သည့်ယုံကြည်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ထားပုံများသည် ကျွန်တော့်အတွက် အတုယူစရာ ဖြစ်စေသည်။ မြန်မာအနုပညာရှင်တွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ ဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတာ မသေချာသောအခါ သူဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အမှောင်ထဲမှာအလင်းရောင်တခုလိုရှိနေပါသည်။ သူကကျွန်တော့်ကို ဆက်လက်ပြောဆိုဖို့နဲ့ ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဖို့ပြောနေတဲ့အသံပါပဲ။
စာအုပ်၏ခေါင်းစဉ်မှာ“ ရောင်စင်အောင်ခင်”ဖြစ်သည်။ ဦး အောင်ခင်အား အနုပညာရှင်များက ပေးသော အမည်ပြောင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းသည် အမြဲတမ်းခက်ခဲသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို တိကျသော ညီမျှသော အဓိပ္ပါယ်ဘာသာပြန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဗမာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် The Master of Colors စာအုပ်သည် အောင်ခင်၏အရောင်ခြယ်လက်ရာအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော အနုပညာရှင်အားလုံး၏ လေးစားမှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ စာအုပ်၏မျက်နှာဖုံးပေါ်ရှိပုံသည် သူ၏ “ အသံ” အမည်ရှိ ပန်းချီ မှဖြစ်သည်။ ကိုကိုကြီးကသူ၏အင်တာဗျူးတွင်“ အောင်ခင်၏ပန်းချီကားများတွ င်အသံများကိုတွေ့နိုင်ပြီး အရောင်များကိုသင်ကြားနိုင်သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအရာကို စာအုပ်စာတမ်းဖြင့်ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ကိုမှာယူရန် နှင့် ပိုမိုသိရှိလိုပါက art@intersections.com.sg တွင် Marie-Pierre Mol ကိုဆက်သွယ်ပါ။
← သဘာဝအတိုင်း လှပနေတဲ့ Cartier SurNaturel High Jewellery
Adamas-TISG Asia Superyacht Charters - Traugott Kaminski နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း →
Adamas-TISG Asia Superyacht Charters – Traugott Kaminski နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မြေထဲပင်လယ်အလယ်ပိုင်း ကျွန်းစုနိုင်ငံ Malta ရှိ ဇိမ်ခံဟိုတယ် ၄ ခု
Bugatti သည် ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Baby II နှင့်အတူ ၁၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အမှတ်အသားပြုသည်။